Dhiillo Culus: Dhayalsiga Shibbanayaasha Labanlaabma, Qalinkii Maxamed Baashe X. Xasan. – Radio Daljir
Dhiillo Culus: Dhayalsiga Shibbanayaasha Labanlaabma, Qalinkii Maxamed Baashe X. Xasan.
Agoosto 13, 2010 12:00 b 0
Qiiro ayuu af kastaa leeyahay. Waa qiiro weyn oo dadka qaarkii murugo ku beerta marka ay arkaan garwaaqsi ahaan gefafka, gawl gawlka iyo xadgudubyada dadka qaar afkaas ka gelayaan marka ay ku hadlayaan, gaar ahaanna marka ay wax ku qorayaan.
Maalin baa meel Internet Caf? ah oo ku taalla magaalada London waxa soo gelaysa Islaan aad u da? weyn oo Ingiriis ah. Waxa ay isla markiiba dhaadaysaa oo isha la helaysaa warqad wargelin ahayd oo meel derbiga ka mid ah ku dhejisnayd oo xanbaarsanayd qoraal gibin ah oo Af-ingiriis ah. Waxa qoraalkaas ereyada ku qornaa ka mid ahaa kelmedda ACCOUNT oo si kama? ah ugu qornayd ACOUNT. Islaantu waxa ay judhiiba dareentay khaladkaas meesha ku jira. Iyada oo haddaba muraaradillaac ah, ayay inankii meheradda hayey, waxa ay si naxariis leh, uga codsatay inuu ama kelmeddaas xaqeeda mariyo oo ka saaro khaladka ku jira ama uu meesha wargelintaas ka fujiyo.
Qiiradu waxa sii badanaysaa oo heerka argagaxa ku sinmaysaa haddii la eego Af Soomaaliga dadka intiisa badani qoraan iyo sida aan in badani ugu aabbayeelin sida ereyadu u qormaan, gaar ahaanna xarfaha ama shibbanayaasha labanlaabma ee Afka Soomaaliga.
In kasta oo qaar kale jiri karaan, haddana sida Guddidii Afka Soomaaligu isku raaceen sannadkii 1972, toddoba ka mid ah shibbanayaasheennu way labanlaabmi karaan. Tilmaan ahaan waxa toddobadaas shibbane lagu baadi soocdaa labadan weedhood;
Mar kasta shibbanayaashaasi ma labanlaami karaan, hase yeeshee waxa lama huraan ah in maraxadaha qaarkood la labanlaabo haddii kale se la gelayo khaladaad waaweyn oo mararka qaarkood dhiillo culus ah mar xagaafka la iska qaadsiiyo ee aan loo ab iyo isir eegin.
Caashi waa wasiirad. Marka qodobka ?da? la raaciyo waa in ay noqotaa wasiiradda. Haddii aan sidaas la yeelin oo loo qoro wasiirada waxa noqonaysaa wadartii ama jamacii wasiir oo weli isna khalad ku sii jiro oo ah wasiirro = wasiirrada.
Qaybta labaad ee warkeenna oo ku saabsan wasiirrada oo dhan waxa aynu u qornay wasiirada oo dhawaaq ahaan ereygu jabnaanayo haddii aan xarafka ?r-da? carrabka lagu adkayn ama aan la shedin, waxaana sax ah in loo qoro ?wasiirrada? sida aynu xagga sare ku soo taabannay. Waxa taas u dhiganta labka iyo dheddigga wakiil. Wakiilad x wakiil. Wakiiladda oo ah haweenay waxa qoraalkeedu ka duwan yahay wadarta wakiil oo ah wakiillo oo marka qodobka la raaciyo u dhigmaysa wakiillada. Bal ha loo fiirsado kala geddisnaan wakiiladda iyo wakiillada.
Bog waxa uu mar la macne yahay xaashida ka midka ah buugga, mar kalena waa xubin ka mid ah jidhka gudaha ee aadanaha ama xoolaha. Haddii qodob la raaciyo waxa uu u qormayaa bogga. Haddii aynu labanlaabkaas ka il-duufo waxa soo baxaya boga oo ah hal magaceed (Boga). Hashayadii Boga boggaa laga hayaa X Hashii Boga bogaa laga hayaa.
Carab carrab la? ayaa carruurta la cayaarayey markii Cali kubbadda uu Cabdi kubada kaga dhuftay. Cabdi weli kubadaa xanuunaysa ka dib markii ay kubbaddu ka haleeshay.
Sallaan buu fuushanaa markii Cali uu salaan wacan na siiyey.
Dhammaan caanaha way dhamaan.
In marka shibbanuhu labanlaabmayo la gartaa waa wax fudud. Dhawaaqa ayaa dhegta iyo carrabkuba dareemi karaan oo lagu kala saari karaan in ninka Carabka ah ee reer Ciraaq iyo xubinta jidhkiisa ka midka ah ee carrabku ay ku kala duwan yihiin shedka ku dhacaya xarafka ?r-da? ee xubinta jidheed ee carrab oo haddii shedku ka baxo noqonaysaa nin ama haweeney Carab ah.
Qodobbada Farta Soomaalida
Meelaha kale ee had iyo gooraale lagu khaldamaa waa marka uu qodob raacayo ereyada qaarkood, gaar ahaan marka ereyadaasi ku dhammaadaan shibbaneyaasha ?d? ama ?g? ee ay raacayaan qodobbada ?da? ama ?ga?.
Qodobbada Afsoomaaligu waa toddoba:
a, ta, da, sha, ga, ka iyo ha.
Qodobbadu magacyada ayay raacaan oo tilmaan garasheed siiyaan.
Loox = looxa
Libaax = libaaxa
Geel = geela
Tib = tibta
Dhallin = dhallinta
Ib = ibta
Nabad = nabadda
Colaad = colaadda
Lo? = lo?da
Il = isha
Ul = usha
Dhiil = dhiisha
Doog = doogga
Taag = taagga
Guri = guriga
Kalluun = kalluunka
Bannaan = bannaanka
Dhul = dhulka
Caano = caanaha
Cune = cunaha
Waxaro = waxaraha
Sida qodobbadu ka marag-kacayaan magac kasta oo Afsoomaali ah haddii uu ku dhammaado shibbaneyaasha ?d? ama ?g? marka uu qodobku raacayo waxa khasab ah in labanlaab yimaaddo.
Wasaaradda, dawladda, xukuumadda, Jamhuuriyadda, iyaasadda, waddaniyadda, dimoqraaddiyadda, daacaadda, madbacadda, qaafiyadda, daaqadda, daasadda, nadaafadda, warqadda, doodda, nabadda, colaadda, niyadda, durriyadda, qabyaaladda, diyaaradda, majarafadda, laambadda, badda, dalladda, maddiibadda, malqacadda, xawaaladda, maaliyadda, shirkadda iwm
Bogga, doogga, diigga, dhiigga, taagga, tuugga, togga, aagga, udugga, unugga, adeegga, edegga, buugga, dheegga, dhuugga, duugga, laagga, mugga, maragga, ruugga, ragga iwm.
Runtii maalin kasta waxa khaladaad aan loo aabbayeelayn lagula kulmaa qoraallada ku soo baxa inta badan jaraa?idka iyo mareegaha internet-ka, gefafkaas oo in badan oo ka mid ahi ka soo jeedaan dhayalsi lagula kaco shibbanayaasha labanlaabma si ula-kac iyo aqoon la?aaniba ku jirto. Dhinaca kale waxa aad arkaysaa shirkad ama hay?ad dhan oo magaceedu si khaldan u qoran yahay sida Xawaalada ?X iyo Y? ama wasaarada ?X iyo Y? iyo Jamhuuriyada ?X iyo Y? iwm.
Qiirada afku waa in gefafka looga damqadaa oo qof kasta oo wax ku qorayaa u tadhaa, teellana u dhigtaa xeerarka jira ee la isku raacsan yahay, haddii xagaafka la iska qaadsiiyo oo la gawl gawlo, sidii neef adhi ah oo waraabe orod ku fayl faylayona, ay ku dhiillo gelisaa oo laga dhawaaqaa.
Waraysiyo ku saabsan iska-horimaad ku dhex maray Khayr-seexay, ee duleedka Garowe, dablay beeleed & ciidanka amniga ee Puntland.
“Iskaashi ay sameeyeen maamulka & shacabka Eyl dartii wax burcad ahi ma joogaan Eyl; Eyl saafi bay ka tahay wax burcad badeed ah” Faysal Khaliif Wacays.